Uma nsukuzonke futhi ngenkuthalo ukusebenzisa igajethi yakho ku-platform "Android", cishe izikhathi ezingaphezu kwesisodwa balwe kunoma yiziphi izinkinga ngokuya "udoti" ukuthi Ukulayisha esibonakalayo, ukuvimbela ukusebenzisa ngokugcwele kudivayisi yakho, futhi ngezinye izikhathi ngisho ngokuphelele "hang" lonke uhlelo .
Lokhu kungafaka ezinye izinqubo elingaqediwe e isilondolozi ye imidlalo nezinhlelo zokusebenza, amafayela asekelayo / izingodo isiphequluli (umlando / amakhukhi), njalo njalo. D. Usuku nosuku, konke lokhu (ngezinye izikhathi kakhulu impela ezingadingekile) ulwazi oluqoqwe futhi kancane clog igajethi yakho . Kulokhu, ifoni kuzosiza lizahlambulula yimaphi amathuluzi esakhelwe, noma ngokusebenzisa zabama-third party. Inketho yokuqala yakhelwe ucishe ukwazi platform abasebenzisi "Android", kanti eyesibili - enemisebenzi futhi okulula.
Ngakho, zama ukuqonda ukuthi yini uhlelo ukuhlanza ucingo, njengoba ukusebenzisa futhi yimaphi amathuluzi ukusebenzisa ngesikhathi esifanayo kangcono.
Esakhelwe ngaphakathi ukusebenza
Uma unomuzwa wokuthi igajethi yakho iqala egijima kancane, kukhona ezinye friezes kanye esibonakalayo zingasabeli, ungazama ukwenza izinyathelo ejwayelekile anconywe ukwenza Onjiniyela platform.
Lezi zihlanganisa ukuhlanza ucingo amathuluzi esakhelwe:
susa konke izicelo okungadingekile isilondolozi ngemenyu izilungiselelo;
Dlulisa yonke imininingwane "ezisinda" kangaka ku sangaphandle SD-ikhadi;
ukuvala ukuvumelanisa namasevisi ubuningi;
platform firmware update;
kabusha kumasethingi factory.
Ezimweni eziningi, lezi zinyathelo kukhona esanele ukwenza igajethi yakho yaqala ukusebenza ngokujwayelekile. Kodwa uma yokuhlanza ezifana ifoni "Android" akusebenzi, ungasebenzisa Izinsiza eceleni ngokushesha nangokunembile uyosihlanza kudivayisi yakho. Zonke izinhlelo zokusebenza ezilandelayo Kulula ukuthola, ngakho izinkinga "Play Store" nanoma iyiphi lithathelwe idivayisi ethile akufanele kube.
Master Hlanza ngokuba "Android" - wuhlelo enamandla futhi ethandwa kakhulu ukuze bahlanze kumadivayisi eselula. yemisebenzi yakhe zibandakanya ukusebenza isilondolozi, susa izinhlelo zokusebenza nokucubungula izingodo ubuningi isiphequluli (umlando, amakhukhi).
Ngaphezu ukusebenza kuqala e Master Hlanza ngokuba "Android" ihlanganiswe antivirus ezihlakaniphile, ukusebenza ku-intanethi. Ngaphezu kwalokho, ithuluzi ifakwe engumngane ezithakazelisayo ukuze kusebenze ezihlukahlukene izindlela energy esisindisa, okuyinto kakhulu Ukulondoloza amandla ebhethri.
Libala zokusebenza kungenzeka:
ukusula inqolobane, izicelo engasetshenziswanga futhi izingodo isiphequluli;
Imodi ukuphuthumisa ngokuzenzakalelayo izicelo kanye imidlalo (80%);
umsebenzi "Ukubandisa" - Ukuthola (uma kunesidingo - off) afune izinto ngenkani kwabanye izinhlelo ukugwema okweqile we processor;
okusindisa mode by iqhakambisa izicelo;
AppLock - ikuvumela ukufihla ezinye izingxenye emehlweni prying (i-SMS, oxhumana nabo, photo zemibukiso, njll ...);
esakhelwe-anti-virus (zikhona ephephile, kodwa njengoba Ukuvikelwa eziyisisekelo - kwanele);
abe eyisipele (amafayela uhlelo yokusekelayo i drive nangaphandle);
uqalisa master - izicelo ukulawula kuzo zonke izigaba.
Uma imemori igajethi ikuvumela, ukhululeke ufake inguqulo ejwayelekile Umbuso indawo, kungenjalo - inguqulo enesisindo esilula (Lite) ngemisebenzi esincishisiwe. Lapho endaweni khulula Friend kakhulu, ungazama isicelo ideskithophu Master Hlanza. Okusho ukuthi, ngosizo ifoni uzobe ukuhlanza ikhompyutha.
Lolu uhlelo lokusebenza encane, mahhala futhi enembile ukuze kusheshiswe igajethi yakho. Uhlelo ukuze bahlanze Amandla Hlanza ivumela ifoni ngokuphazima kweso ukuqeda isilondolozi zanqwabelana, ukuphequlula umlando, futhi isiphequluli, amakhukhi, uphinde ukhubaze izinhlelo zokusebenza engadingekile noma kuyaqabukela asetshenziswa futhi uhlelo add-on.
Ngaphezu kwalokho, ukhulula inkumbulo futhi izogcina inqolobane ezithile for ukusebenza evamile kokusetshenziswa kubonwa platform (ingacishwa). Into iyasiza uma ukhohlwa ukuvala izinhlelo ngemuva.
Izici eziyinhloko the Umbuso:
Ukuhlanza efonini yakho esuka ezingadingekile isiphequluli cache izingodo;
Umphathi Isicelo kuzovumela komunye legatsha ukuze uvale zonke engadingekile;
okukhipha empeleni egcwele ulwazi mayelana nedivayisi yakho.
Le Umbuso indawo iklanyelwe ngokuyinhloko ukuze nokwandisa izicelo amageyimu, kodwa kungenye into ehluke kakhulu umuzwa ezanele kanye nezinye izinhlelo yepulani yasekhaya. Okusetshenziswayo isebenza silula: uma wena uqalise uhlelo lokusebenza ekhethiwe, Game Ukulekelela sicisha zonke izinqubo zangokwasemuva kanye platform wamanje (ngaphandle ohlelweni eyisisekelo), futhi aqondise imithombo iwukuhlale umsebenzi asebenzayo evumela ukuthi kakhulu ukwandisa isivinini nokuzinza lakamuva.
Ngaphezu kwalokho, ukusebenza kuqala kohlelo kuhlanganisa ukusula inqolobane kanye isiphequluli izingodo. Okusetshenziswayo kuthatha isikhala okuncane kakhulu ebhukwini cishe ezingabonakali ngokuya isisetshenziswa umfutho.
ukudlala imidlalo ikumodi ngabanye (Ukukhipha kuzo zonke izici inqubo);
ukuhlanza cache isiphequluli izingodo.
Ukukhetha lokhu uhlobo isicelo, qiniseka ukuthi cabangela efonini yakho. Ukuthobeka Nokubhekana ephansi ekupheleni onobuhle akunandaba mqondo ukufaka Tinsita "ezisinda" kangaka nemitfombolusito khudlwana, ngoba kuyonezela isimo sorry kakade kohlelo eziminyene. Ngaphandle Clean Master kudinga okungenani 512 MB RAM wamamegabhayithi ambalwa isikhala kwi yangaphakathi isitoreji medium.
Ukuze smartphone linesizotha kungcono ukuthola amathuluzi efanayo elula ukuhlanza - hhayi zenziwe futhi ungathathi share sengonyama isikhala kwimemori (Amandla Hlanza futhi Game Ukulekelela). Qiniseka ukugcina leli phuzu engqondweni ngaphambi oluthandiwe lokusebenza, kungenjalo uzolenza sibi igajethi yakho.
Indlela ukufihla inamba MTS?
Yelaphani amakhala yisisu kalula nge "Nazol Okuthuthukisiwe"
Kanjani ukuze uthole imiqulu yasendulo "Skyrim"?